Baxreyn oo uu ka furmay Shir lagu Xaraashayo qadiyadda dhulka Filastiin. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Baxreyn oo uu ka furmay Shir lagu Xaraashayo qadiyadda dhulka Filastiin.
On Jun 25, 2019 299 0
Banaanbax ka dhacay Qazza oo looga soo horjeedo shirka Baxreyn.
Shir la dooanyo in inta ka dhiman dhulka Filastiin loogu gacan geliyo Yahuudda ayaa ka furmay wadanka Baxreyn.
Magaalada Al-manaama ee wadanka Baxreyn, waxaa ka furmaya kulan ay soo qaban qaabisay dowladda Maraykanka, kaas oo la doonayo in dhulka Filastiin si toos ah loogu gacan geliyo maamulka dhul boobka ah ee Yahuudda.
Shirkan ayaa waxaa lagu wadaa iney ka qeybgalaan dowlado badan oo carbeed, madax katirsan Maraykanka, Yahuuda iyo shakhsiyaad kale, waxaana magac ahaan uu huwanyahay shir lagu raadinayo maalgelin lagu sameeyo dhulka Filastiin, balse xaqiidiisa hoose waxay khubradu sheegayaan inuu yahay mid gebi ahaanba dhulka Filastiin loogu gacan gelinayo Yahuudda.
Dowladaha carbeed ee ka qeybgalaya waxaa kamid ah maamulka Aala-sucuud, Imaaraadka, Masar, Urdun iyo kuwa kale, waxaana dhanka kale qaadacay Shiinaha iyo Ruushka oo u arka shirkan mid ay wadato dowladda Maraykanka.
Jarid Koshiner oo ah la taliyaha Donald Trump, sidoo kalena qaba gabadhiisa ayaa shir gudoominaya kulanka, waxaana uu gogol xaar u yahay qorshe uu Maraykanku ku dhawaaqi rabo, oo dalka Filastiin intiisa kale loogu gacan gelinayo Yahuudda, halka reer Filastiinna ay yeelanayaan oo keliya Qazza iyo magaalooyin yar yar.
Wadamada caalamka Islaamka ayaa waxaa ka dhacaya banaanbaxyo waaweyn oo lagu diidanyahay shirka Al-baxreyn, waxaana sidoo kale culimada diinta Islaamka ay sheegeen iney xaaraam tahay ka qeygalka kulankaas, oo ay sheegeen in la doonayo in lagu iibiyo qadiyada ka dhexeysa muslimiinta ee ah Filastiin.